Zvigayo Zvaishanda — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Munogonawo nezvazvo vemifananidzo akafanana Lil Wayne. Kune vamwe rap vanongoda kuva nomukurumbira uye kuita mari. Kwete Lil Wayne. Anoda kuti mukuru nguva dzose. Inodya, anorara, uye anofema mimhanzi yake. Ikakuteerera pachake. Iye anogara Studio. Ari zvichida kukanganwa zvimwe nekudetemberwa pane rap vakawanda akanyorwa. In pfungwa dzake, iye havazokwanisi kugara chinhu chisiri mukuru nguva dzose. Sei? Nokuti ari zvikuru anosundwa chido kuva chakanakisisa.
Kazhinji kana vanhu nezvazvo adzingwe, dzinorevei chinhu chakadai. Vari kureva vanhu vari basa-zvinangwa, kana akatsunga kubudirira minda yavo. Asi pane zvakawanda adzingwe yechiKristu? Tiri kuti inodzingwa nemhepo? Chii chinofanira paakadzinga muKristu uye Zvinofungwa kutyaira isu kupi? Zvakanaka Ndinofunga tinogona kuwana mhinduro yomubvunzo uyu muna VaRoma 12.
Mushure comprehensively wakatambanudza dzidziso Gospel muna VaRoma 1-11, Pauro anoshandura atiudze sei isu ikozvino tinofanira kurarama. Zvitsauko gumi okutanga zvave pamusoro chii chatinofanira kutenda, sei isu tiri tiponeswe, zvakaitwa naMwari muna Kristu, zvichaitwa naMwari muna Kristu, nezvimwewo. Zvino muchitsauko 12, Pauro anoita zvachose kuchinja kutiudza zvatinofanira kuita. Pauro anoita izvi VaEfeso uye VaKorose zvakare.
Saka ndinoda dzinotiratidza ndima iyi, uye tarira zvinhu zvitatu zvatinofanira kuita chiedza chii akazvizarurira Mwari pano.
Ndinokumbira kwamuri saka, hama, netsitsi dzaMwari, kuti mupe miviri yenyu sechibayiro chipenyu, chitsvene uye chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu yomudzimu. Musareverana vafanane ino, asi shandurwai kuvandudzwa pfungwa dzako, kuti kubudikidza kukuedzai kuti kunzwisisa chii kuda kwaMwari, zvakanaka, zvinogamuchirika uye zvakakwana. (Romans 12:1-2)
ini. Uchadzingwa By Mercy
Saka apo Pauro anoita kusuduruka ichi, anotikumbira kwatiri. He nomwoyo wose anoteterera, iye vakashinga uchitikurudzira kurarama imwe nzira. Asi tisati tarisai zvaari rinotikurudzira kuita, Ndinoda kutarisa nzira anotikumbira kwatiri.
Ndinokumbira kwamuri saka, hama, netsitsi dzaMwari… (Romans 12:1munhu)
Kutiudza kuti tinofanira kurarama Pauro haritauri tinofanira kurarama imwe nzira nokuti "Tinoda kuva mukuru kana tsvene,"Kana nokuti" uyu sei upstanding nhengo vanhu vanofanira kurarama,"kana, "Vanamai vedu zvakatidzidzisa nani pane kuti,"Kana kuti kunyange, "Kuitira kuti Mwari vachakufarira." No, anotipa imwe chido mhando.
Pane musiyano mukuru pakati chii nyika nechido, uye chii tinofanira rinosundwa. Nguva ichangopfuura Ndakataura mukadzi aiva muridzi chikamu bhizimisi iye nemumwe akatanga akawanda apfuura. Akandiudza nezvebhizimisi uye zvakaoma sei aishanda. Zvino akandiudza zvose vana anazvo uye zvakadini iye akavada. Akati kuti upenyu hwake hwakanga zvose nezvebhizimisi akatanga nevana vake. Uye iye akanongedza avo sezvo anomuda chikuru, uye varo zvinotikurudzira kuita zvose kuti anoita.
Zvino zvinoita sokunge chinhu chakanaka kutaura. Iye anomuda vana uye basa rake. Asi ndinoda kuti muzive kuti muKristu ari kukurudzirwa chinhu zvakadzama. Nokuti muKristu vavariro yedu hakumboperi pamwe chinhu munyika ino. saka isu fanira rudo uye kuriritira vana vedu uye tinofanira kushanda nesimba uye tinofanira kunyange kutsvaka kufarira basa zvatinoita. Asi hakuna kune vanofanira kuva yedu yokupedzisira kurudziro. Hapana avo anofanira kuva chinhu chikuru runotibatsira isu.
Pano Pauro anotaura chimwe chinhu kunze pachedu uye yedu yepanyika mupenyu chido. Iye hunotikurudzira, kwete zvatinogona vamwe, asi chii Mwari akatoita kuti isu. Iye hunotikurudzira netsitsi dzaMwari.
Saka apo Pauro anoti netsitsi dzaMwari, chii chingaita kuti kufunga?
Pauro anogona kunge vachifunga mbiri Gospel Mwari akatipa. nokuti 1:16, Paul anoti Gospel uyu, "Simba raMwari rinoponesa, kutanga kumuJudha tevere kuna Greek. "
Kana aigona kufunga chitsauko mana, apo anoti, "Vakaropafadzwa avo vane mabasa okusateerera mutemo zvaregererwa, uye vane zvivi zvakafukidzirwa; wakaropafadzwa munhu naani Ishe haangandinzwi kuverenga chivi chake. "
Kana zvimwe ari kufunga chitsauko shanu apo anoti, "Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti, patakanga tichiri vatadzi Kristu akatifira."
Kana aigona kufunga chitsauko sere kwaakanga anotiudza kuti, "Mwari aita zvinorehwa nomurayiro simba nenyama kwete kuita. Nokutuma Mwanakomana wake…"
Kana ndinofunga aigona kufunga chitsauko mapfumbamwe, kwaakanga anotiudza "kuti ruponeso hakunei nesimba kwevanhu, asi pana Mwari ane ngoni "
Ndinofunga kuti Pauro ane zvose chokwadi izvi akanaka pamusoro ngoni dzaMwari mupfungwa pano.
Mwari akatipa ngoni, ari kutipa ngoni, uye Achatipa tsitsi. Tinofanira kukurudzirwa kwete chete kubudikidza netsitsi takave atopiwa, asi kubudikidza netsitsi tichagamuchira.
Zvino Pauro achiti chiedza kuti tsitsi, pano sei uchigara. Tiri kukurudzirwa, rinosundwa kuti tsitsi.
Saka tiri rinosundwa nzara kudya, uye vamwe vari anosundwa chido kuva mukuru kushanda kupfuura munhu. Saka kana muKristu anofanira rinosundwa netsitsi dzaMwari, chii chinofanira netsitsi ava achivasundira kuti?
II. Uchadzingwa Kunamata
Mupe miviri yenyu sechibayiro chipenyu, chitsvene uye chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu pakunamata. (Romans 12:1B-D)
Zvino apo Pauro anoudza vaRoma kuti mupe miviri yavo sezvibayiro, mutauro anoshandisa chinorehwa kuti anongedzere kudzokera Yekare kunamata uye yokubaira. Saka ngatitaurei pamusoro zvishoma
munhu. Old Testament Background
Mwari mutsvene. Man hakusi. Man hazvirevi kukodzera kuva pamberi paMwari kana kutaura naye chero nzira, asi Mwari waiva nyasha zvakakwana kutsvaka boka vatadzi, Izirayeri, uye kuti vave noukama naye. Asi nekuti Iye mutsvene uye tiri vatadzi, Vakasagona kubvumirwa chete kutaura naye chero nzira yekare. Havana kugona kumunamata kufanana vaizova zvifananidzo uye vanamwari venhema vakanga vachinamata. Kana vakati vachienda kunamata Mwari aifanira kuva mazwi ake. Vaigona chete kutaura naye nenzira akaisa uye kubvumirwa.
Saka pashure pokuvanunura vanhu ava, Mwari akavapa anorayira uye akairayira nhungamiro pakunamata. Mwari akavaudza kuti kuvaka tebhenekeri uye akaapa yokubaira. Iye akairayira kuti sei vaikwanisa kumunamata uye vachimushumira. Kundobayiwa uye chibayiro mhuka yakanga yakakura pakunamata Old Testament. Vose vanhu vaMwari vakarayirwa kuita zvibayiro izvi kuti aswedere Mwari.
Nezvibayiro izvi vakabvuma chivi chavo uye vanoda kukanganwirwa uye zvibayiro akavayeuchidza utsvene hwaMwari. mhuka idzi zvaiitirwa kuratidza vanhu kuti kana vakatadza, rufu ndiwo chirango. Mhuka akafa panzvimbo pavo. Zvibayiro zvaiitirwa kuva chikamu upenyu akararama achiteerera Mwari.
Naizvozvo nzvimbo iyo vaigona kusangana naMwari tabhenakeri (zvishoma tende apo Mwari akagara) uye gare gare temberi. Zvechokwadi Mwari kwose kwose, asi izvi ndizvo Iye akatanga. Akaudza ungave vanondinamata navo, nenzira iyi, panzvimbo ino. Saka apo Pauro anoti tiri kupa miviri yedu kuna Mwari sechibayiro mupenyu, zvinofanira kuyeuka ichi yokubaira.
Zvakanaka NT inojekesa, kuti zvibayiro aya kumbobvira kwaireva kuti zvachose. Vakanga aireva kuti kunongedzera chibayiro chaicho, Jesu. Similar mhuka, kuti vanofanira kuva vakachena, Jesu ndiye chibayiro chakakwana nokuda kwezvivi zvedu. Hebrews anotiudza kuti chibayiro ichi chikuru chaiva kamwe-for-zvose. Hazvina anofanira kudzokororwa. Akamira panzvimbo yedu, uye iye akafa panzvimbo pedu. Asi kusiyana nemhuka vachibayira, Jesu akamuka kubva nyasha mazuva matatu gare gare, vakunda vavengi vedu. Saka nokuuya kwaJesu, ichi yokubaira yekare raenda.
Nekuuya kwaJesu anochinja kunamata Mwari nokusingaperi. Mumwe wangu kufarira mienzaniso iyi iri John chitsauko mana nomukadzi patsime.
Mukadzi akati kwaari, "Sir, Ndinoona kuti muri muprofita. Madzibaba edu ainamata pagomo iri, asi imi munoti muJerusarema ndimo mune nzvimbo munhu yaanofanira kushumirapo. "Jesu akati kwaari, "Woman, nditendei, awa iri kuuya apo musiri mugomo iri kana muJerusarema here kunamata Baba. Imi munonamata chamusingazivi; isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponeso runobva kuvaJudha. Asi awa rinouya, uye pano ikozvino, apo vanamati vechokwadi vachanamata Baba mumweya nomuzvokwadi, nokuti Baba vanotsvaka vanhu vakadaro kuti vamushumire. Mwari ndiye mweya, uye vaya vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nomuzvokwadi. " (John 4:19-24)
Mukadzi uyu vakafunga kuti sezvo Jesu aiva muJudha, aida kunamata muJerusarema patemberi. Temberi yaiva, panguva ino, nzvimbo Mwari akabvumira vanhu vake kutaura naye. Well Jesu anojekesa kuti norufu rwake, nguva itsva iri kuuya.
Hatichina kusangana naMwari imwe nzvimbo imwe mhuka kuzobayira. Tinogona kusangana naMwari chero! With rufu rwaJesu, zvibayiro iwayo gumiswa. Jesu haasi chete chibayiro, asi Ndiye temberi itsva umo chibayiro zvinoitika. Nzvimbo tinofanira kuva kunamata Mwari muna Kristu. Kuwedzera pakuva chibayiro, uye temberi, Jesu ndiye Mupristi wedu. Ndiye kwedu nzira kuna Mwari.
Saka imi havadi muprista, kana mhuka, kana chivakwa kunamata Mwari. Zvaunongoda Jesu! Kana uri pano nhasi uye hauzivi Jesu, Ndinoda kukurudzira kuti upfidze uye vatende.
-Our bodiesThe ndima inoti tiri kupa miviri yedu. Zvino handifungi kuti zvinoreva isu chete kunamata Mwari wedu nemiviri. Ndinofunga Paul rinoreva, hatina kupa chikamu isu, asi yedu yose muchizvinyengera kuna Mwari. Wedu wose kuzviremekedza ndiye chibayiro kuti tinogona kupa. Tiri kupa upenyu hwedu, kwedu, kwedu zvose kuna Mwari.
Kuna marudzi akasiyana ezvipo. Vamwe y'all pamwe kudzidza ichangopfuura uye akashatirwa kudzidza zvipo. Ndivo vamwe zvipo kuti wapiwa sezvo kunoguma mukati mavo, kufanana zvokutambisa. Yose kusvika pakupa mumwe nechitoyi iri kuitira kuti kutamba toyi.
Ipapo chipo rudzi rwechipiri. zvipo izvi vanopiwa senzira zvimwewo. Saka kune vamwe venyu vari pano kuti chete kudzidza vakanotora mari yakawanda sezvo zvipo. ikozvino, chii kana iwe aibata zvipo iwayo dzibvise sezvo mugumo mavari? Zvakadini kana iwe akashandisa kuongororwa uye mari sezvo Wallpaper? Izvozvo zvaizova matongo uye mupi kwaizova akatsamwa.
upenyu hwako kuti mhando chipo chechipiri. Zvinonzi zvaireva kuva nzira kumugumo kunamata Mwari.
SomuKristu, haumbofi kupiwa chipo mhando wokutanga. kuroora chipo ose uchimuka, chinorehwa kushandiswa senzira mumwe mugumo. Kuti kuguma ndechokuti imi vaizonamata Mwari noupenyu hwako.
b. Mutsvene uye Zvinogamuchirwa Mwari
Pauro anoti izvi zvibayiro kurarama kuva vatsvene uye zvinogamuchirwa kuna Mwari. Zvinorevei izvo? Tiine Old Testament zvibayiro, Mwari akanga nhungamiro dzine. Nokuti chibayiro aitofanira kuva mhuka yakachena, munhu aifanira kupfidza uye kuda kuteerera Mwari, nezvimwewo.
Saka isu, tiri kupa isu sezvo zvipenyu zvibayiro. Saka sei tiri kuzvipa? Mwari akapa nhungamiro sei muKristu zvino kurarama. Ari Akatitaurira yemararamiro mhando richava zvinomufadza. Kana tikatarisa vamwe chitsauko chino chaizvo, tinoona Pauro anovamba kuisa zvinodiwa sokunge.
mundima 3-8 anotaura nezve kushandisa zvipo zvomudzimu zvakanaka muviri wose. Uye mundima 9-21 anokurudzira vaRoma kudanana, uye anovadzidzisa sei vari kutaura mumwe uchitikurudzira.
Tinoonawo izvi Ephesians 4 apo Pauro anopa ichi mhando imwe muripo. Ndiye anoteya panze nedzidziso muna VaEfeso 1-3, uye zvadaro muchitsauko 4 iye anoita zvimwechete. Anotanga kuvaudza zvavangaita vari kurarama.
Anovaudza kuti kuedza kubatana uye anovakurudzira kuti Mwari akapa kwavari zvipo zvakasiyana-siyana nokuda kwokuvakwa kwomuviri. Uye anotaura nezve muviri kushanda pamwe kuti zvinovaka mumwe nomumwe.
Community. Handigoni kubatsira asi cherechedzai kuti zvose Romans uye VaEfeso, Pauro anotanga nokutaura upenyu muviri. Haugoni kupa upenyu hwako sechibayiro sezvo unofanira, vachigara voga. Kufuratira kereke yaMwari kufuratira kwaMwari hwako.
Anoenderera mberi mundima 17-29 kuvakurudzira kurarama nenzira iri maererano zvavakadzidziswa uye kukanganwira sezvo vangobvumira zvaregererwa. Uye anoenda mberi muchitsauko 5.
Mwari akatidana kuti saiye, izvo zvinoreva utsvene. Ari akatiudza "vatsvene sezvo ini ndiri mutsvene." Asi kazhinji hwedu tarira zvakapesana mutsvene. Asi ndine vamwe kurudziro kwauri…
"Naizvozvo, kana munhu ari muna Kristu, Ndiye chisikwa chitsva. Zvakare zvapfuura; tarira, zvitsva yasvika. " (2 Corinthians 5:17)
Waizoitei kana uchiona mwana kutaurira mubereki wavo zvokuita? Kukambaira dzakapoteredza imba achirayira vabereki vavo kumativi? Iwe vaizofunga vakanga sebenzi! Sei? Nekuti ndivo mubereki, asi ivo vari kuita sezvinoita mwana. It chichirwadza apo vanhu vane mamwe simba, ropafadzo asi vanoramba kufamba mazviri. Zviri kunyange crazier muKristu kurarama chivi. Apo Mwari akatiponesa, takanga patsva. Mwari akatiita zvisikwa zvitsva muchiso. Tine pakubvuma ichi. Vazhinji vedu vachiri kufunga kuti tiri chete vatadzi. Tiri vatadzi, asi isu tiri kupfuura vatadzi. Way kupfuura muchaona Bhaibheri kutidana vatadzi, muchaona Bhaibheri kutidana vatsvene uye vana vaMwari uye upristi hwoumambo uye anoruramiswa.
Kana ukatadza, hamusi kuva ndiwe ikozvino. Muri kudzokera ani iwe vaimbova. Kana ukaverenga New Testament tsamba, Waona kuti vapositori vari kuudza vaKristu nguva dzose kurega kudzokera nenzira yavo yekare. Vari uchivayeuchidza kuti haasi ndivanaani zvakare.
Saka pangava mumwe mukamuri ichi vanonyatsoteerera anoramba kuteerera vabereki vavo. Mwari Anokudana vaiteerere uye kuzviisa pasi pavo. Pangava mumwe ane zvizhinji ruchiva pfungwa. Mwari Anokudana kutendeuka kubva uye muve vakachena mupfungwa. Pangava munhu zvechokwadi munhu akatsamwa. Mwari Anokudana kuva rudo nenyasha uye anokanganwira. Hazvina kukwana chete kuuya kuchechi. Mwari Anokudana kuva saKristu.
Uye Mwari akatipa simba kurarama mhando iyi upenyu.
C. Nzwisisai Service
Uye maererano Paul, kunamata uku ndiko basa redu kunonzwisisika. Wakamboona mafirimu iwayo apo munhu anoponesa upenyu mumwe munhu uye vanongodya mugoitevera zuva rose mushure ose zuva? Kufanana Matrix 2. Zvakanaka kwatinoita ngoni dzaMwari vanofanira kuva kukuru uye hwakanyanya uyewo.
Kana mukandipa dhora ndingadai kunyemwerera, kana mukandipa hembe itsva Ndichaudza zvimwe ruoko rwako, kana iwe ndiunzirewo idzva bhuku ndizive mhere hareruya. Asi kana iwe Ndidzikunurei pazvivi zvangu uye kuvimbisa ini unearned husingaperi, chete pfungwa rudaviro ari kupa iwe upenyu hwangu hwose. Ndicho basa rangu kunonzwisisika.
D. All Roupenyu
Saka izvi ndizvo tinofanira kurima. Hwedu hwose vanofanira kuva ichi chibayiro chipenyu wakabayira kuna Mwari.
Vamwe vedu vari vadzingirwa mune zvetsika pfungwa yeshoko. Tinoda kubudirira; tinoda kukwira manera. Uye ndicho chinhu chakanaka. Asi unofanira kuva nechokwadi uri vachikuya zvakanaka. Uri hanya kubudirira kwako uye chinzvimbo? Kana kuti uri kufunga kunamata Mwari?
Uye ani muri ngaakuyire? Vamwe vedu vanoshanda chaizvo nesimba, uye isu tiri anosundwa kudiwa tendero vabereki vedu '. Kana vamwe vedu muchikuya saka tinotarisira zvakanaka shamwari dzedu. Vamwe vedu vanoshanda zvakaoma kungofadza isu. Asi tarirai isu hazvifaniri vachikuya uye achibayira gaya yedu mhuri yedu, kana chechi yedu, kana isu. Isu ngaakuyire Mwari. Tiri kupa basa redu kwaAri. Kana uri kupa basa rako zvikurukuru munhu kunze Mwari, unemhosva nokunamata zvidhori. Namata Mwari, kwete munhu kana chinhu anogona kupa.
Zvose zvamunoita, kushanda nemwoyo wose, sezvo Ishe uye kwete kuvanhu, muchiziva kuti kuna Ishe muchagamuchira nhaka sezvo mubayiro wenyu. Uri kushumira Ishe Kristu. (VaKorose 3:23)
Uye chokwadi kubva pachii chipo ichi ndicho netsitsi dzaMwari. Wechitatu chinhu tinoona mundima iyi kuti tinofanira kushandurwa.
Hama nehanzvadzi tave abude ino. Apo Pauro anotaura nezve "nyika" pano, ari kureva yepanyika uye zvakaipa nzira kwenyika tiri kurarama. Ari kutaura pamusoro chivi nokushanda kwadzinoita yatiri anoshandiswa kuona yakatipoteredza zvose. Dzimwe shanduro dzinoti mashoko "yazvino."
Yazvino tiri kurarama ari kumukira kuna Mwari. Vazhinji vedu vachiri kufunga ino sezvo shamwari yedu chete inoda rubatsiro. Ngazvisadaro. Tinofanira kufunga nzira zera iri kuva muvengi wedu. Uye tinofanira kufunga kuti sezvo vanhu vaMwari tiri kuva chiedza kune ino nenzira dzayo, uye isu tiri kuva vazivisi Good News unoponesa.
Hatifaniri kuedza kuti kukanganiswa nenyika. It chete chinoitika. Vanofurira mafungiro edu pasina isu achiedza. Muenzaniso wakanaka izvi inopisa nenyaya akaita ungochani. Zuva nezuva tinoita ndotarira mumwe Hurumende iri kubvumira ngochani kuroorana. Uye vezvenhau, uye Vanamuzvinadzidzo, uye pfungwa vatungamiri vose vari kuda kuti agamuchirwe ungochani. Vari zvose kumanikidza isu kubvumirana navo uye kusiya tsika dzedu vazhinji. Uye ivo vachava kutaura nezvedu, isu vanoseka, uye isu semhuru bigots kusvikira tinobvumirana. kusunda zvenyika rakasimba. Zviri simba chaizvo iyezvino. Asi isu havafaniri zvokuyeredza pamwe pari. Mwari akatidana kuti vaende kundorwa magetsi.
Ungochani zviri nyore. Zvakadini udyire, kana kukara, kana kuzvikudza? Avo ndiwo nzira dzenyika, kwete Mwari. Uye hatigoni vafanane nyika.
Ngatitorei Kutarira VaKorose 3. Iri ndiro rimwe bhuku apo Pauro anoisa panze dzidziso Gospel, ipapo vachambokanganwa uye rinotiudza kuti tinofanira kurarama muchiedza kuti. Saka nokuda zvitsauko zviviri yokutanga Pauro anotsanangura zvakadzama zvinhu, uye ipapo anotiudza sei Zvinofanira kutikanganisa.
b. Asi Iva mushandurwe nokuvandudzwa kwepfungwa dzenyu
Pane nditodze chii nyika kuita, tinofanira kushandurwa. Uye nzira iyo isu tinoshandurirwa riri nokuvandudzwa kwepfungwa dzedu.
Anoti kwavari kurarama zvakasiyana, kwakavakirwa zvakaitwa naMwari…
Mwari anoda kuti kushandurwa. Uye ichi ndicho chii kuti kushandurwa sokunge. Zvinoita sokunge vachikanda rufu zviri pasi pano matiri, uye kupfeka unhu hwaMwari.
C. Ataurazve Mind Your
Asi tingava sei kushandurwa uye kupfeka Godly unhu. Paul anoti zvakajeka, "Nokuvandudzwa kwepfungwa dzenyu."
Hatidi kunzwa zvinhu zvakadai. Asi pfungwa dzedu vachifanira kuva kuvandudzwa. Mafungiro edu unodzinga Kuita kwedu, uye mafungiro edu anofanira kuchinja. Handisi kureva zvakafanana kana wati, "Ndinoziva ndinofanira kuita zvakanaka, asi…"Kwete kuti ndiko kufunga chivi kuti inofanira kuchinjwa. Nyama yedu Inosendamira kurutivi achienda pari uye anotsvaka mikana atadze. Uye nyama yako chete dzakawedzerwa nenyika uye dhiabhori.
pfungwa dzedu dzinofanira kuvandudzwa ose chete zuva. Tinozviita sei izvi? Tinovandudza pfungwa dzedu nokuda kugara nzira yaMwari mafungiro pamberi pedu. Everyday tinonzwa nhema pashure nhema pashure nhema kubva mumwoyo yedu, uye nyika, uye dhiabhori. Tatononokerwa chokwadi chaMwari kuti kurwisa nhema idzodzo.
D. Kunzwisisa kuda kwaMwari
Chinangwa tishandurwe iyi kukwanisa kunzwisisa kuda kwaMwari. Kuda kwaMwari uye kuda kwaMwari oga kungaita kuti kurarama upenyu hunomufadza. Munoona kuti zvaanorondedzera kuda Mwari zvakanaka, zvinogamuchirika uye zvakakwana. Sezvo imi idzva pfungwa dzako, uye ruzivo wakashandurwa upenyu, uchakwanisa kuona kunaka Shoko raMwari. Uye uchakwanisa kuona kuti inotungamirira kuti upenyu uye kuti upenyu kuti zvinomufadza.
Ndinorangarira nguva yokutanga Shoko chandirova. Handina kumbova zvakafanana kubva.
Saka pane vamwe vedu vari anovava uye asingakanganwiri. Izvozvo kwenyika. Uri kurarama zvinoenderana nzira dzenyika. Pane vamwe vedu vari azere paruchiva uye vari kuita unzenza. Izvozvo kwenyika. Uri kurarama zvinoenderana nzira dzenyika. Kuchine vamwe vedu vari voga. Hatisi chikamu chechi, saka isu tinongonyarara zvipo zvedu pachedu uye kwete kuvaka muviri. Asi isu chete tizvivakire kukwira. Izvozvo kwenyika.
Tinofanira kutendeuka kubva panzira iwayo enyika, uye kushandurwa nokuvandudzwa kwepfungwa dzedu. Uye kana tinenge kushandurwa, tichaona kunaka kwaMwari.
VaKristu tinogona kuvimbisa kuva Basketball zvikuru vatambi, kana enyika makuru, kana rap makuru. Asi zvinhu zviri pachavo havagoni kuva chii kudzinga isu, uye havasi pakupedzisira chii tinofanira kurima. Kana uri aiming zvinhu zvepanyika uye kubudirira yepasi, uri aiming kuti yakaderera.
Tiri kuti rinosundwa nengoni dzaMwari, akadzingwa kunamata Mwari, uye isu tiri kushandurwa neShoko Rake. Ngatitorei kunyengetera.
PhillipBavilla • Kubvumbi 16, 2014 pa 3:11 pm • pindura
Ndakafarira kuti mharidzo wamuchangobva anazvo, kana akaita kana pose iwe akataura chokwadi. sezvo ndakanga kuverenga, Ndaona zvinhu akawanda kuti ini kinda kuona pachangu kuita, asi ndakanga kumbobvira kuzviita ndoga, Kristu ndiye chete nzira, Sezvakaitika John 14:6, uye pose kuuya namatambudziko kumativi, Kristu ndiye simba chete kuti ini nokusingaperi vanoda, Pauro akataura muna Philipians 4:13. asi ini pava kinda akamuka chinhu nokuda Gospel Rap uyu zvinhu, uye ndiri adzingwe naKristu kuva neushingi kwaAri chero ezvinhu, kana zvayo munyika, kana kunyange zvayo Mumba Mwari kuita mharidzo kana kuzvipira. Ndinonamatira ushingi, uye wokwaEfremu kuita nepandaigona kushivirira.
Liam • Nyamavhuvhu 19, 2014 pa 7:14 pm • pindura
Zvikuru, rinotyisa romukova rwendo. Ramba in kuuya uye pumped nokuda album itsva
Lawrence • Nyamavhuvhu 27, 2017 pa 8:42 pm • pindura
nguva dzose akadenha. Ndatenda.